Nrụpụta ebu - Chapman Technology Co., Ltd.
CNC igwe bụ igwe na-egwe ọka na njikwa CNC (Computer Numerical Controlled), nke a na-eji egwe ọka 2D / 3D ma ọ bụ usoro dị iche iche. Igwe ọka CNC bụ usoro ntinye nke CNC dịka ma ọ bụ ịkpụcha na ịcha, ma nwee ike iru ọtụtụ ọrụ ndị e mere site na ịcha na ịkpụcha igwe. Dị ka ịkpụ ihe, igwe ihe na-eji ngwa ọrụ na-agagharị. Otú ọ dị, ngwá ọrụ dị na igwe igwe CNC nwere ike ịgafe na ọtụtụ axis, ma nwee ike ịmepụta ọtụtụ ụdị, oghere na oghere. Ke adianade do, na workpiece mgbe nile gafere igwe igwe dị iche iche. Iji merie ikuku ahịa, Onye kere Chapmanụlọ ọrụ na-etinye ego na ngwa ngwa CNC nhazi ngwa ngwa. Anyị nwere usoro 4 maka ngwa MAKINO na-arụ ọrụ ngwa ngwa site na Japan, onye ziri ezi ya nwere ike iru 0.005-0.01mm.
Na mgbakwunye, anyị nwekwara igwe 4 CNC maka ọkara agwụcha na 2 roughing.
Onye kere Chapman'CNC nhazi akụrụngwa nwere ike izute mkpa nhazi gị niile, ọ bụghị naanị ntinye ebu, ihe mkpuchi ebu, akụkụ ebu, mana anyị nwekwara ike ịnye ọrụ ọrụ CNC maka ọtụtụ akụkụ maka ụfọdụ ndị ahịa akpaaka.
Igwe eletriki eletrik (EDM), nke a makwaara dị ka "ọkụ", bụ nkà na ụzụ nke dị adị ruo ogologo oge. N'oge usoro EDM, a na-eduzi eletrik eletrik ka ọ gafere n'etiti electrode na arụ ọrụ nke mmiri mmiri dielectric kewara, nke na-arụ ọrụ dị ka insulator eletrik. Ozugbo etinyere ọkụ eletrik dị elu, mmiri a na-eme ka mmiri dielectric dị mma ma gbanwee ka ọ bụrụ onye na-eduzi eletriki ma mebie ihe ọrụ ahụ site na ịpịpụta ọkụ ka ọ gbanwee ya n'ụdị achọrọ ma ọ bụ ọdịdị ikpeazụ.
Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ime nkwado siri ike nke ụlọ ọrụ na-akpụzi, ọ dị mkpa idozi igwe dị mma. EDM (Igwe na-agbapụta eletriki) Igwe na-arụ ọrụ Waya na-arụ ọrụ na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ngalaba injinia, nyere General Manufacturing na nkenke chọrọ iji rụọ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ a.
Igwe bụ usoro nke ịkpụzi ihe site na iji ndị na-egbutu ihe iji wepu ihe site na ịmalite ịkụcha ihe n'ime mpempe ọrụ. Enwere ike ime nke a na - agbanwe ngbanwe dị iche iche na otu anyụike ma ọ bụ ọtụtụ anyụike, na - agba ọsọ ọsọ, na nrụgide
N'ihi na ụfọdụ nkenke Ebu, kenha ziri ezi anyị Inserts, Lifter, mmịfe, na ndị ọzọ na bughi akụkụ nke ebu dị ezigbo mkpa. N'ozuzu, nhazi nhazi nke igwe igwe anyị kwesịrị ịdị n'ime 0.005mm.
Fit ebu na Assembly:
E nwere 8 ìgwè na anyị ebu nzukọ ogbako. Ise n'ime ndị na-akpụzi dị iche iche bụ ọrụ maka nrụpụta nke ebu ebufe, na atọ ndị ọzọ dị iche iche na-ezube maka ebu ezinụlọ anyị.
Mgbe ebu ebu ebu mechara, anyị kwesịrị ịzọpụta ebu na-egbu maramara ya. Kwenye na ịkpụzi ebu nwere ike mezuo nnwale achọrọ ozugbo enwere ike.